Octane X ayaa laga heli karaa Mac Store iyadoo la siinayo hordhac bilaash ah | Waxaan ka socdaa mac
Bixiyaha Octane X ayaa laga heli karaa Mac Store iyadoo la siinayo hordhac bilaash ah
Tony Cortes | | Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac, dhowr
Waxaa jira barnaamijyo badan oo loogu talagalay bixinta, laakiin haddii aad rabto inaad sameyso wax tayo sare leh, waxaad ku xisaabtami kartaa faraha hal gacan kuwa ku habboon hawsha. Tufaax iyo Ooto Waxay soo saarayeen mishiin awood siiya muddo sanad ka badan, haddana waxaa lagu sii daayay Mac Store.
Magacaagu waa Octane X, waana cusbooneysiin caan ah OctaneRender oo ka timid horumariyaha Otoy. Haddii aad ku jirto adduunka animation 3D, ka faa'iideyso soo bandhigida arjigan cusub, oo bilaash lagu heli karo sanadka ugu horeeya.
Otoy wuxuu hadda soo saaray mishiinkiisa cusub ee muuqaalka muuqaalka 'Octane X' ee 'App App Store' kaas oo la jaan qaada dhammaan Mac-yada ku shaqeeya macOS Big Sur, oo ay ku jiraan moodooyinka. Silicon Apple.
Markii ugu horreysay lagu soo bandhigo WWDC 2019, Octane X waa cusbooneysiin lagu sameeyo Bixiyaha Octane waxaa qoray Otoy, oo dib loogu qorey Birta iyada oo qayb ka ah iskaashi lala yeesho Apple. Sanadkii la soo dhaafay, aragtida guud ee si buuxda u shaqeyneysa ayaa horeyba loo sii daayay.
Octane X wuxuu leeyahay a engine cusub joomatari mesh iyadoo si toos ah udhaxeysa xariiqa toosan ee toosan iyadoo laga faa'iideysanayo qaabab badan oo GPU ah, oo ay kujiraan Thunderbolt 3 eGPUs dibadeed Waxaa sidoo kale lagu heli karaa barmaamijka RNDR ee loo qaybiyey, kaas oo u oggolaanaya farshaxanada garaafyada inay u adeegsadaan shabakad eGPU baahsan howlaha ugu adag ee bixinta.
Tilmaamahaas, Octane X waxay kaloo taageertaa ACES, OpenColorIO, iyo Muujinta EXR pixels qoto dheer. Waxay leedahay qaabab node ku saleysan, hooska iyo tifaftiraha goobta iyo nidaamka buuqa AI ee horumarsan.
Bilaash wakhti xadidan
Daahfurka App Store ka sokow, Otoy wuxuu sidoo kale soo bandhigayaa laba dalab oo gaar ah oo cusub oo loogu talagalay dadka isticmaala Mac. Dhammaan Mac-yada kale, oo ay ku jiraan aaladaha M1, ayaa marin u heli doona hal sano oo bilaash ah waxaa qoray Octane X Prime.
Codsiga wuxuu u baahan yahay in lagu rakibo Mac MacOS Big Sur 11.1 ama ka dib oo leh sawiradii ugu dambeeyay ee isku dhafan ee AMD ama Intel. Codsiga waxaa laga heli karaa Mac App Store lacag la’aan. Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah bogga Otoy.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Bixiyaha Octane X ayaa laga heli karaa Mac Store iyadoo la siinayo hordhac bilaash ah
Ericsson ma imaan doono MWC21 sanadkaan sidoo kale.
Ka BMW waxay cadeynayaan inaysan lumin riyadii gaariga Apple